Umqhubi we-TV okanye isiqendu somboniso weTV yi-episode esiyi-standalone yokuba umdali okanye umvelisi uza kudala ukubonisa abaphathi benethiwekhi kwi-Hollywood. Uninzi lwexesha inethiwekhi ithatha ibhawuntyi yeqhekeza elilinge ngokusekelwe kumgca womdali, okanye inkcazo yendlela umboniso we-TV uza kuba ngayo.
Isiqendu seqhinga sisetyenziselwa ukuzithengisa lonke uchungechunge kule nethiwekhi. Ngamanye amaxesha, ngokusekelwe kwinqanaba le-pilot, amanethiwekhi athengisa nje amacwecwe ambalwa.
Ngamanye amaxesha inethwekhi ithenge ixesha elipheleleyo lemiboniso yeTV, ngokuqhelekileyo i-episodes ezingama-22. Amaxesha amaninzi amaqhekeza omqolo wesiganeko aya kuhluke kakhulu kumqhubi we-TV, ngamalungu amatsha amatsha okanye abalinganiswa okanye indawo. Ukuba akukho zinguqu eziphambili, isiqephu somqhubi siba sisiqephu sokuqala soluhlu.
Ixesha lokuqhubela phambili kwiHollywood ngokuqhelekileyo libhekwa njengeJanuwari ngethuba elithile entwasahlobo. Emva kokuba amanethiwekhi athathe imimango ekwindla, ii-episodes zee-TV ziyahanjiswa kwaye zirekhodwa ziqala ngo-January. Ngokuqhelekileyo bavala ngo-Matshi okanye ngo-Epreli kwaye amanethiwekhi anquma ukuba ngubani oya kufumana ukukhanya kwe-greenlight ukuze aqhubeke nokuvelisa iziqephu. Malunga noMeyi, amanxibelelwano anemibutho ephezulu kwaye anikezele uluhlu olutsha kwiinkampani zoomatshini kunye nee-ad ad.
UMoya weKrismesi wawuhlobo lwesiganeko sovavanyo eSouth Park. UMoya weKrismesi wathunyelwa ngeHollywood njengekhadi leholide.
Emva kokuba abaphathi kwiComedy Central babone, bavakalisa uMat Stone kunye noTrey Parker malunga nokuphuhlisa uluhlu olupheleleyo, ngokusekelwe kulo mfutshane.
"I-Simpsons Ukulungiswa Ngomlilo Ovulekileyo" isiqendu esingafanelekanga seSypsons . I-FOX ilindele ukujonga ukuba isiqendu esipheleleyo sisenza njani ngokulinganisa, xa kuthelekiswa nezifutshane ezimfutshane ze- The Simpsons kwi -Tracey Ullman Show .
Isiqendu somqhubi se- Adventure Time sisisigxina esinesidalwa esineenkwenkwezi eziPhezulu kunye noJake, kunokuba uFinn noJake. (Ipeni, emva komdali wombukiso, iPendleton Ward.) Kwi-pilot, uPen and Jake uhlangula i-Princess Bubble Bubblegum kwi-King King. Njengomzekelo wenguqu ephosweni, uJohn Kassir (i- Kung Fu Panda: Imigqaliselo yezobuhlungu ) evakalisa i-Ice King kumqhubi, kodwa uTom Kenny (i- SpongeBob SquarePants ) ithatha indima kulo lonke uluhlu.
Isiqendu somqhubi weNickelodeon esineenkwenkwezi yezilwanyana ezinomlilo weBellly West njengoZim. Kodwa uMdali uJhonen Vasquez waziva ukuba ilizwi lakhe liyabonakala kakhulu kwindima yakhe njengeFry, kwaye wayedlala indima kunye nomlingisi uRichard Horvitz, owadlala uBilly kwi -Grim Adventures kaBilly & Mandy .
USeth MacFarlane kunye noMat Weitzman baphupha i- American Dad! emva kokhetho luka-2000. I- Guy yasekuqaleni yaxoshwa kwaye iMacFarlane wayekwazi ukubeka izandla, kodwa xa ivuselelwe, yadlula uYise wase-Amerika! ukuya ku-Weitzman noMike Barker.
Lungisa kwi-Analysis Analysis
I-Prekistoric Pictures and Profiles
Ukujonga Emuva kuRodney King kunye ne-LA Uprising
Ixabiso lentambo ye-Intanethi ye-Gasoline
Khumbula ngeMibhalo yeBhayibhile njengentsapho
Ulwimi lweeNkcazo: 'I-Woodchuck'
UManuel Sáenz: Uthando lukaSimon Bolivar noKolonel kwi-Army Rebel